झुक्याउला है रुघाखोकीले, बेलैमा गरौं कोभिड–१९ परीक्षण « Nepal Health News नेपालको नं.१ जनस्वास्थ्य पत्रिका
२०७८, ५ माघ बुधबार १४:५५ मा प्रकाशित
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौँ । विश्वमा कोरोना भाइरस संक्रमणको तेस्रो लहर सुरुवात भइसकेको छ । तेस्रो लहरको सुरुवातसँगै ओमिक्रोनसँग सम्बन्धित धेरै कुरा बाहिरिने क्रम जारी छ ।
विश्वभरका स्वास्थ्य विशेषज्ञहरुले नयाँ भेरियन्ट र पुराना भेरियन्टबीचको अन्तर पहिचान गर्न थालिसकेका छन् । कोरोना महामारीको दोस्रो लहर ल्याउने डेल्टा संक्रमणमा स्वाद र गन्ध हराउनेजस्ता लक्षण देखिएका थिए । यसैगरि ओमिक्रोनमा रुघाखोकीको लक्षण धेरै अनुभव गरिएको छ ।
जनसंख्याको घनत्व बढी भएको राष्ट्रमा कोरोना भाइरस संक्रमण तिव्र गतिमा फैलिरहेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा विश्वभर २२ लाख २२ हजारभन्दा बढी व्यक्तिमा भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । यस अवधिमा १३ लाख ४८ हजार जना कोभिड–१९ संक्रमणमुक्त भएका छन् । यसैगरि ५ हजार ५४३ जनाको निधन भएको छ । पुष्टि भएका नयाँ संक्रमितमध्ये सबैभन्दा बढी अमेरिका, भारत र स्पेनमा रहेका छन् ।
बेलायतको zoe कोभिड अध्ययन एपमा हरेक दिन हजारौँ संक्रमितले आफूलाई देखिएको लक्षण दर्ता गर्छन् । एपमार्फत ओमिक्रोनको लक्षण अध्ययन गर्दा भाइरस म्युटेन्ट हुनुकासाथै यसको लक्षणमा पनि तिव्र परिवर्तन देखिएको छ ।
नेपालमा पनि दैनिक कोरोना संक्रमितको संख्याका वृद्धि भइरहेको छ । दैनिक संक्रमितको संख्या हेर्दा नेपालमा पनि कोभिड–१९ को तेस्रो लहर सुरुवात भइसकेको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
कसरी छुट्याउने ओमिक्रोन र रुघाखोकी ?
रुघाखोकी र ओमिक्रोनका लक्षण धेरै हदसम्म मिल्दोजुल्दा छन् । त्यसकारण पिसिआर परीक्षणबिना ओमिक्रोन र रुघाखोकीका बिरामी पहिचान गर्न कठिन रहेको शुक्रराज ट्रोपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका क्लिनिकल रिसर्च युनिट संयोजक डा. शेरबहादुर पुनले बताउनुभयो ।
कोरोना भएनभएको थाहा पाउन पृष्ठभुमि आवश्यक पर्ने उहाँको भनाई छ । ‘आफ्नो सम्पर्कमा आएका सहकर्मी, साथीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भए वा आइसोलेसनमा बसेको अवस्थामा कोभिड संक्रमण भएकोे अनुमान लगाउन सकिन्छ ।’—डा. पुन भन्नुहन्छ, ‘लक्षणको आधारमा मात्र कोरोना वा सामान्य रुघाखोकी के हो ? यसै भन्न सकिन्न । त्यसैले आफूलाई संक्रमण भएको आशंका लाग्ने बित्तिकै कोभिड–१९ परीक्षण गराउनुपर्छ ।’
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा दैनिक २ सय जनाको हाराहारीमा पिसीआर परीक्षण गर्न आउने गरेको डा. शेरबहादुर पुनले जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार परीक्षण गर्न आउने धेरै व्यक्तिहरुमा टाउकोकोे अगाडिको भाग दुख्ने, आँखा दुख्ने, शरीर कटकट दुख्ने, घाँटी दुख्ने, थकान महशुस, मन्द ज्वरो आउने, नाकबाट सिँगान बग्ने वा नाक बन्द हुने जस्ता लक्षण देखिएका छन् ।
‘माथि उल्लेखित लक्षणहरु सामान्यतया खोप लगाएकाहरुमा देखिएका छन् । यी बाहेक अघिल्लो भेरियन्टहरुमा देखिँदै आइरहेको उच्च ज्वरो, खोकी, श्वास प्रश्वासमा असहजता तथा स्वाद/गन्ध थाहा नपाउने जस्ता लक्षणहरु पनि नदेखिने भन्ने चाँही होइन ।’— डा. पुन भन्नुहुन्छ, ‘खोप लगाउनेहरुमा संक्रमण हुनसक्ने सम्भावना भएपनि जटिल अवस्था आउने वा मृत्यु हुने जोखिम भने अत्यन्त न्युन हुन्छ । त्यसैले धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरुले कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउन आवश्यक छ ।’
ओमिक्रोनबाट बच्न कोरोना भाइरसविरुद्धको पूर्ण मात्रा खोप लगाउनुकासाथै जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न डा. पुन सुझाउँनुहुन्छ । उहाँकाअनुसार भीडभाड नगर्ने, भिडभाडमा नजाने, सेनिटाइजरको प्रयोग र साबुनपानीले पटक पटक हात धुनुपर्छ । यसकासाथै सही तरिकाले मास्कको प्रयोग गर्न र सामाजिक दुरी कायम गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।